Eufy RoboVac G20 ngwakọ nwere uche na dị irè ihicha [Nlebaanya] | Ngwa akụkọ
Miguel Hernandez | 15/03/2022 13:36 | General, Nyocha
Eufy na-aga n'ihu na nzọ na ejikọrọ, nwere ọgụgụ isi na, karịa ihe niile, na-enyere aka n'ụlọ. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka obere robots okirikiri ndị na-eme egwuregwu n'ọtụtụ vidiyo na TikTok, na-abụkarị n'ihi enweghị mmasị pụrụ iche nke ndị ezinụlọ ndị ọzọ na-emeso ha, dị ka nwamba.
N'oge a anyị na-enyocha n'ime omimi Eufy RoboVac G20 Hybrid ọhụrụ, ihe ọzọ dị n'etiti etiti nwere nnukwu mmịnye na nhazi dị mfe. Soro anyị chọpụta nhọrọ ikpeazụ a nke katalọgụ nhicha ejikọtara nke Eufy na-enye anyị ma ọ bụrụ na ọ bara uru iburu n'uche ndị asọmpi ya.
2 Nhazi nke ihe na njirimara teknụzụ
3 Nhicha na arụmọrụ
N'okwu a, Eufy emeghị nzọ, ọ mebeghị ihe ọhụrụ, ọ naghị anwa anwa ... Ka anyị kwuo eziokwu, ọ na-esiri ike ịhụ onye na-ehicha ihe nkedo robot nke na-adọrọ uche gị, n'ezie, ha niile bụ otu na m ghọtara na ọ bụ. n'ihi n'eziokwu na nhazi ya na-arụ ọrụ nke na ịgbanwe naanị otu millimita ga-eweta nsogbu karịa ngwọta. Ọ bụ n'ihi nke ahụ anyị agaghị eburu n'uche na igwe nhicha rọbọt a dị ka nde atọ ndị ọzọ dị n'ahịa na anyị ga-elekwasị anya na nhazi nke ngwaike ya na àgwà nke ihe ya.
Ọ masịrị gị? Zụrụ ya naanị euro 299,99 na Amazon!
mop nwere ike ịsacha
Ngwaọrụ ahụ bụ 32 centimeters na dayameta na ihe kacha ịtụnanya bụ na ọ bụ naanị 7,2 centimeters. na ọ bụ na Eufy ama adọ aka ná ntị anyị na anyị na-eche ihu a kama mkpa ngwaọrụ, ihe anyị na-akwado. A na-eji iko mee akụkụ nke elu, mara mma maka mkpịsị aka ma ọ dị mfe ihicha, ihe na-amasị m karịa "jet black" nke ụdị ndị ọzọ na-etinyekarị na nke ogologo oge anaghị agabiga ụbọchị ole na ole. Banyere ibu, anyị enweghị ọnụ ọgụgụ ziri ezi, ma na-eburu n'uche na anyị agaghị ebu ya n'akpa anyị, echeghị m na ọ dị mkpa itinye ya na ọnụ ọgụgụ, ọ bụ ezie na anya ịwụ ọma Enwere m ike ịgwa gị na ọ dị oke ọkụ.
Nhazi nke ihe na njirimara teknụzụ
Anyị nwere nhazi omenala n'ihe gbasara ihe nke ala ala nke Eufy RoboVac G20 Hybrid, na a gwakọtara Central broom, na silicone na naịlọn bristles, nke n'echiche m bụ ndị kasị dị irè maka ụdị nile nke elu. A na-ejikọta ya na wiil abụọ nwere cushion iji nwee ike imeri ihe mgbochi dị ihe dị ka centimita 3, na wheel na-adịghị agwụ agwụ na-eduga ngwaọrụ na ahịhịa otu akụkụ.
Maka azụ Mmiri unyi na-anọgide, tank mmiri, nke a ga-ejikọta na nke ahụ e kwuru n'elu, na mop nke na-ejikọta ya na Velcro. Otú ọ dị, anyị na-enwe mgbanwe ON / Gbanyụọ, ihe a na-ahụbeghị na ụdị ngwaahịa a n'oge na-adịbeghị anya na nke a na-enwe ekele n'ezie, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ịghara iji ya mee ihe ruo ogologo oge, Eufy kwuru nke ọma.
N'ikpeazụ, n'akụkụ elu, dị ka anyị kwuru, anyị nwere ike iko isi; otu bọtịnụ maka nhazi na njikwa na WiFi connectivity LED egosi, ọ dịghị ihe ọzọ dị ịrịba ama.
Na teknuzu ngalaba, anyị nwere WiFi Njikọta iji mekọrịta ngwakọ RoboVac G20 anyị na ngwa Eufy, dị na ha abụọ iOS dị ka android kpamkpam n'efu. Anyị nwekwara ihe mmetụta gyro maka igodo, yana usoro ihe mmetụta na-elekwasị anya na robot adịghị ada n'elu elu dị iche iche. Otu n'ime usoro nke ike suction, nke ga-agbagharị n'etiti 1.500 na 2.500 Pa dị ka mkpa anyị si dị, n'elu achọpụtara na ike anyị kenyere site na ngwa.
Nhicha na arụmọrụ
Ozugbo anyị mekọrịtara robot ya na ngwa Ụlọ Eufy anyị ga-enwe ike ịgbanwe n'etiti ụdị mmiri ara anọ na ụdị "ịchacha". Ngwaọrụ a, n'agbanyeghị enweghị sistemu igodo laser, na-eji sistemu akpọrọ Smart Dynamic Navigation, ya bụ, ọ na-eji ahịrị myirịta kama ịbụ usoro enweghị usoro, nke na-enye ya ohere ka ọ bụrụ nkenke na ịrụ ọrụ nke ọma na nhicha.
Anyị nwere usoro nke scrub site na mop mmiri, nke, dị ka ị maara nke ọma, na-adọrọ mmasị maka ala osisi na ala, ma na-ahapụ "akara mmiri mmiri" n'elu ala seramiiki.
Oke mkpọtụ ọ na-ewepụta bụ 55dB ihe dị ịrịba ama na-atụle ya suction ike na ọkpụrụkpụ nke ngwaọrụ, na ọ bụ na otu n'ime ogige nke Eufy bụ kpomkwem nzọ na nkịtị robot na-aga na-ahụghị. N'ikpeazụ, anyị ga-eburu n'uche na anyị ga-enwe ike ịmekọrịta ya na ya Alexa mgbe ọ bụla anyị jisiri ike hazie ya na ngwa ngwa ngwa.
Njikwa sitere na ngwa:
njikwa ụgbọ ala
Nchacha ntụpọ (na okirikiri)
Ma nnwere onwe, anyị ga-agagharị n'etiti nkeji 120 nke ọ na-enye anyị ọnọdụ ịgbachi nkịtị nke obere mmịpụta, na-eso 70 nkeji ihicha na ọkọlọtọ mode na ihe dị ka nkeji 35 ma ọ bụrụ na anyị edobe ya na ọnọdụ mmịpụta kacha.
N'oge a anyị na-eche ihu na a pụtara vasatail robot, nke pụtara n'ụzọ bụ isi n'ihi na ọ bụ nnọọ ịgbachi nkịtị na kọmpat, nke dị anya na ndị ọzọ pretensions bụ nanị ịrụ ya aga-eme n'ụzọ na-abụghị invasive. Nnwere onwe zuru oke na ike ịmị ahụ dị ịrịba ama, karịsịa na-atụle akụkụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ngwa ahụ nwere usoro ọrụ nwere oke nke dabara na njirimara ngwaọrụ ahụ. N'ezie anyị na-ezute tupu ihe ọzọ dị n'etiti etiti maka ọnụahịa nke a na-ere na Spain bụ 300 euro, ọ bụ ezie na ị nwere ike nweta ya ozugbo site na tụlọ ahịa dị n'ịntanetị eufy. Ọzọkwa, anyị ga-atụle ma ọ bara uru ịzụrụ ngwaọrụ n'otu ọnụ ahịa na-enye atụmatụ ndị ọzọ, ma ọ bụ ịkụ nzọ na ụlọ ọrụ ama ama nke arụ ọrụ ya na ịdịte aka ya na-ekwe nkwa. Ka ọ dị ugbu a, nhicha, nsị, nnwere onwe na ahụmịhe mkpọtụ na Eufy RoboVac Hybrid G20 a dị mma.
Ngwakọ RoboVac G20
Ihe na: 15 March nke 2022
Mgbanwe ikpeazụ: 15 March nke 2022
Ọ na -eru unyi n'ụzọ dị mfe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Eufy RoboVac G20 ngwakọ nwere ezi uche na nhicha dị irè [Nlebaanya]
Tronsmart na-egosi Bang 60W, onye na-ekwu okwu mkpagharị obi ọjọọ maka nnọkọ oriri na ọṅụṅụ